एयरफोनको अत्यधिक प्रयोगले स्मरण शक्ति गुम्‍ने खतरा ! | Suvadin !
एयरफोनको अत्यधिक प्रयोगले स्मरण शक्ति गुम्‍ने खतरा !
Jun 12, 2019 07:33
मोबाइलको ब्यापकतासँगै कानमा एयरफोन झुण्ड्याएर यात्रा गरिरहेका युवापुस्ता यत्रतत्र देखिन्छन् । खासगरी गीत-संगीत सुन्‍न एयरफोनको प्रयोग गरिन्छ । यससँगै फोन गर्दा तथा अन्य अडियो सुन्‍न एयरफोन प्रयोग गरिन्छ ।
एयरफोन कुनै खराब कुरा त होइन । एयरफोन लगाएर गीत सुन्दा अरुलाई डिस्टर्ब हुँदैन । आफूलाई मन लागेको गीत सुन्न पनि पाइन्छ । तर, कतिपयले भने राति सुत्दा पनि एयरफोन लगाउँछन् । उनीहरु एयरफोन कानमै जोडेर निदाइ दिन्छन् । यो खराब आदत हो ।
कयौं अनुसन्धानहरुले राती सुत्‍नु अगाडि एयरफोनमा गीत सुन्दा नकारात्मक असर गर्न सक्ने देखाएका छन् । वीर अस्पतालको नाक, कान र घाँटी विभागमा उपचार गर्न आउनेमा पछिल्लो समय कानका बिरामी सबैभन्दा बढी हुने गरेको बताइएको छ ।
विभागका प्रमुख डा. ढुण्डिराज पौडेलले पछिल्लो समय नाक, कान र घाँटी विभागमा सबैभन्दा बढी कानका बिरामी आउने गरेको बताए । “पछिल्लो समय कानको समस्या बढी देखिनुमा एक त बढ्दो एयरफोन र हेडफोनको प्रयोग हो,” उनले भने, “वायु प्रदुषणले श्वासप्रश्वासमा जस्तो असर गर्छ, त्यस्तै ध्वनी प्रदुषणले पनि स्मण शक्तिमा असर गर्ने गर्छ ।”
लामो समय अथवा घण्टौंसम्म एयर फोनको प्रयोग गर्दा हाम्रा कानभित्रका सेलहरु विस्तारै मर्छन् । जसका कारण स्मण शक्तिमा ह्रास आउने डा. पौडेल बताउँछन् । डा. पौडेलका अनुसार एउटै हेडफोन र एयरफोन विभिन्न व्यक्तिले प्रयोग गर्दा त्यसबाट किटाणुहरु पनि सर्ने गर्छन् । जसले कानको संक्रमण निम्त्याउने गरेको देखिन्छ ।
कतिपय कानको संक्रमण वंशाणुगत पनि हुने हुँदा कानमा कुनै पनि समस्या आउँने वित्तिकै तुरुन्तै नाक, कान र घाँटी रोग विशेषज्ञकोमा जानुपर्ने डा. गुरागाईं बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमा अधिक मात्रमा एयरफोन वा हेलफोनको प्रयोगले एक तिहाई मानिसहरुमा कानको समस्या देखिएको छ । एक अर्ब बालबालिकाहरुमा स्मरण शक्ति कमजोर हुने समस्या देखिएको संगठनले जनाएको छ । बालबालिकाहरुलाई सानै उमेरदेखि नै हेडफोन र एयरफोनको प्रयोगले स्मरण शक्तिमा ह्रास आउने संगठनले जनाएको छ ।
अत्यधिक एयरफोन प्रयोग गर्नुका बेफाइदा के-के हुन् त ?
राती ढिलासम्म एयरफोन लगाएर गीत सुन्दा निद्रा प्रभावित हुने गर्छ । किनकी इयरफोन जोडिएको मोबाइल पनि आफैसँग हुन्छ । त्यो बजिरहँदा हाम्रो मस्तिक सक्रिय रहने गर्छ निद्रा लाग्दैन । यसबाट मस्तिष्कलाई आराम मिल्दैन ।
माथि भनेअनुसार एयरफोन लगाएर गीत सुन्दा मस्तिष्क राम्ररी सुत्न सक्दैन । मस्तिष्कको केही भाग सक्रिय नै रहन्छ । साथसाथै मुटुको चाल पनि तिव्र हुने गर्छ । जुन स्वास्थ्यको लागि निकै घातक कुरा हो । एयरफोनबाट उच्च आवाजमा गीतसंगीत सुन्दा कानको जालीमा दवाव पर्ने गर्छ र कानसम्बन्धी समस्या हुने गर्छ । साथै, कानेगुजी समेत सामान्य भन्दा धेरै बन्ने गर्छ । यसले सुन्ने क्षमतालाई समेत प्रभावित पार्छ ।
हेडफोनको प्रयोगले कानको संक्रमण पनि हुनसक्छ । एउटै हेडफोन विभिन्न व्यक्तिले प्रयोग गर्ने हुँदा हेडफोनको साथमा किटाणुहरु पनि सर्ने गर्छन् । जसले कानको संक्रमण निम्त्याउने गर्छ ।